कोरोनाका नयाँ लक्षणहरू थाहा पाइराखौ डा. पाण्डे • Health News Nepal
✍️ डा. सन्दीप राज पाण्डे ,
वरिष्ठ रक्त नशा रोग विशेषज्ञ
डा. सन्दीप राज पाण्डे , वरिष्ठ रक्त नशा रोग विशेषज्ञ
हामी माझ धेरै नै गम्भीर समस्या भइरहेको छ। सबै जनाका परिवार धेरै नै कठिनाई झेलिरहेका छन्। यति नै भन्छु हिम्मत नहार्नुहोस् । आशावादी रहनुहोस्। जे पनि छ अन्त्य अवश्य हुन्छ। यो सधैँ रहन्न ।
आज कोभिडका केही नयाँ लक्षण लेख्न मन लाग्यो जुन नसोचेका लक्षण पनि हुनसक्छन्। यस्ता लक्षणलाई वेवास्ता गर्नु हुँदैन। जस्तै रुघाखोकी बाहेक हाम्रो मुख सुकिरहनु, ज्वरो , स्वास फेर्न गाह्रो, ओठ सुकिरहनु, ओठमा घाउ हुने, आँखा रातो हुने, स्वाद थाहा नपाउने, आलस्य हुने , कमजोर हुने , गन्ध थाहा नपाउने, भोक नलाग्ने ,जिब्रोको रंग फेरिनु, आदि कोरोनाका लक्षण हुन सक्छन । तर यी सामान्य मानिसमा नदेखिन सक्छन्। कसैलाई छाती दुख्न सक्छ। देब्रेतिर दुख्छ भने हृदयघात हुन सक्छ। कोभिड निमोनिया मात्रै होइन यसले रगतको नासालाई बन्द गराउन सक्छ । हृदयको नासा बन्द भइ हृदयघात र मस्तिष्कको नासा बन्द भइ मस्तिष्कघात हुन सक्छ। मानिसले अनौठो कुरा गर्नु , ठिक सँग नबोल्नु पनि कोभिडका लक्षण हुन सक्छन।
साधारणतया पेट दुख्नु , बान्ता हुनु , पखाला लाग्नु, जिउ दुख्नु , टाउको दुख्नु , छालामा दाग आउनु आदि कोरोनाका लक्षण हुनसक्छन्।
यी सँगै खुट्टामा दुखाई र सुन्निने हुन सक्छ। यस्तो हुनुको कारण रक्त नासामा रगत जमेर क्लाट बन्नु र डीप वेन थरोमबोसिस हुनु । जुन उछिट्टिएर फोक्सोमा जान सक्छ। सास लिन गाह्रो हुनु तथा ज्यान पनि जान सक्छ। साथै हात खुट्टाको रक्त नसा बन्द भइ हात चिसो हुनु र कालो हुनु पनि कोभिडका लक्षण हुन सक्छन। यसको उपचार समयमा नभए ज्यान जान सक्छ। यस्ता कुनै पनि असामान्य लक्षण कोरोनाको हुन सक्छ।
यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक संग सल्लाह र परामर्श लिनुपर्छ। मास्क लगाउनु नबिर्सनु होस । पानी पर्याप्त मात्रामा पिउनुहोस्। अत्यावश्यक बाहेक बाहिर नजानुहोस। घरकै बगैंचामा बसेर आनन्द लिनुहोस् । तातो पानीको बाफ लिनुस। चुरोट जस्ता अन्य पेय पदार्थ नखानुहोस्। धेरै गुलियो र आमिलों खानेकुरा नखानुहोस्। आफु र आफ्ना परिवार संग रमाइलो गर्नुहोस्। High protein diet लिनुहोस्। दिनमा तिन चार पटक खानेकुरा खानुहोस्। शारीरिक व्यायाम गर्नुहोस्। पेटको बलमा सुत्नुहोस् र डीप ब्रेथ व्यायाम गर्नुहोस्।
हामी जित्नेछौ। आशावादी रहौं ।
(हाल : डा. पाण्डे अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा कार्यरत छन्।)
Tags: Annapurna Neuro HospitalCorona Virus #Covid19Dr.sandeep pandey